Mbọsị Ụka 12 Septemba 2021
Onye rụrụ ụbọchị
Ndi kachasi nma nke uwa, ndi nka na ihe okike.
Fraịdee 10 Septemba 2021
Ezigbo njiri kwesiri ka amaara ya nke ọma. Kwa ụbọchị, anyị nwere obi ụtọ igosipụta ndị na-ese ihe dị ịtụnanya bụ ndị na-emepụta ihe mbụ na nke mepụtara, usoro dị ịtụnanya, ụdị ejiji na eserese okike. Taa, anyị na-ewetara gị otu n'ime ndị nrụpụta ụwa kachasị mma. Checkout enwetara onyinye ihe omuma nke ubochi ma nweta ihe nlere gi nke ubochi.